बिदाईमा बेहुलीको यो उग्र रुप, घि’सारेरै घोडा चढाइयो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on बिदाईमा बेहुलीको यो उग्र रुप, घि’सारेरै घोडा चढाइयो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व काल देखि नै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ । छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्त कालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भावि पुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो ।
अक्सर बिदाईको बेला हामिले बेहुलिहरु रुएकै पाउछौ तर यो ढंगबाट रुएको चहि निश्चय पनि पहिलोपटक देख्दैछौ ।सो बिवाह बझाङ जिल्लाको हो र त्यहाका विशेष समुदायमा यस्तै प्रथा यदि छ भने त्यो भने हामी अनबिज्ञ छौ ।बेहुलिलाई भित्रबाट बाहिर बोकेर उचालेरै एकदमै गाह्राे ढंगबाट ल्याइयो र घोडामाथि चढाइयो अनि बेहुलि रुदैरुदै गइन ।
खैर नवबिवाहित उक्त जोडिलाई सुखद दाम्पत्य जिवनको शुभकामना । हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्रीः